Arday hor tuban safaaradda Mareykanka ee Burundi - BBC Somali
Arday hor tuban safaaradda Mareykanka ee Burundi
Image caption Arday u dhalatay waddanka Burundi oo hor tuban dhismaha safaaradda Mareykanka ee Burundi
Dadku waxay ka mudaaharaadayeen tan iyo Axaddii go'aanka uu madaxweyne Pierre Nkurunziza ku doonayo inuu u soo istaago doorashada bisha June.
Xukuumadda ayaa xirtay jaamacadda Khamiistii sababtuna waxa ay ku sheegeen amni darro.
Gelinkii hore ee Khamiisti ayey dhowr boqol oo arday ah isku dayeen inay abaabulaan socod ay ka sameeyaan bartamaha Bujumbura.
Waxay doonayeen inay madaxweynaha ka joojiyaan inuu si rasmi ah warqadihiisa magacaabista ugu gudbiyo guddiga doorashooyinka.
Waxay ardaydu BBC u sheegeen in safaaradda Mareykanku ay tahay meesha kaliya ee ay amni ku dareemayaan, ayagoo ka cabsi qabay inay ciidanka amnigu ku daba jiraan.
Mareykanku weli arrintaas kama hadlin, laakin diblomaasi sare oo Mareykan ah, Tom Malinowski, oo Khamiistii la kulmay madaxweyne Nkurunziza wuxuu ka digay xaaladda ka taagan Burundi, isagoo sheegay inuu dalku marayo meel khatar ah.
Image caption Dibadbaxyo ayaa hareeyay dalka Burundi tan iyo markii uu madaxweynaha ku dhawaaqay inuu xilka markale u tartamayo
Baraha bulshada ee Internet-ka ayaa la xannibay, idaacadana waa la xiray, banaanbaxyadana waa la mamnuucay.
Rupert Colville, oo ka tirsan xafiiska xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa isna jimcihii sheegay in uu ka walaacsan yahay in maamulayaashu ay shacabka ka hor istaageen xorriyatul qowlka.
Ilaa 7 qof ayaa ku dhintay banaanbaxyadii ugu balaarnaa ee ka dhaca Burundi tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii sokeeye 2005-tii.
Image caption Madaxweynaha dalka Burundi, Pierre Nkurunziza
Khudbaddiisii uu shacabka u jeediyey maalinta shaqaalaha adduunka ee 1da May ayuu madaxweyne Nkurunziza, oo hore fallaago u ahaa, wuxuu ku hanjabay in xukunno adag ay mutaysan doonaan kuwa lagu helo inay ka dambeeyaan wax uu ku tilmaamay dhaqdhaqaaqyada fidnada.
Dastuurka waddanka wuxuu dhigayaa in madaxweynaha laba goor oo kaliya loo dooran karo xafiiska, laakin xulafada Mr. Nkurunziza waxay ku doodayaan in doorashadii hore aysan xisaabta ku jirin maadaama uu baarlamaanku soo magacaabay.
Aqalka Senetka ee Burundi ayaa ku dhawaaqay in maxkamadda dastuuriga ay eegi doonto sharci ahaanshaha in madaxweynuhu mar seddexaad isu soo taago qabashada xafiiska.
Mr. Nkurunziza ayaa awoodda hayey tan iyo 2005tii, markaasoo uu si rasmi ah u soo idlaaday dagaalkii sokeeye.
In ka badan 300,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaalkii dhex maray milateriga ay u badnaayeen Tutsiga laga tirada badan yahay iyo kooxaha fallaagada Hutu-ga, sida kooxdii Mr. Nkurunziza uu ka tirsanaa ee CNDD-FDD.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in uu jiro doono baaritaan xagga sharciga ah oo ku saabsan banaanbaxyada.